Kanpetlet CDF / ကန်ပက်လက်
ချင်းပြည်နယ်မှာ စစ်ရေးတင်းမာမူ ကာလအတွင်း အရပ်သားတွေ ပစ်သတ်ခံရမှု ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေ ပိုများလာနေပါတယ်။ ချင်းပြည်သူတွေ မတရားအသတ်ခံရတာ (၂၀၀ ) ကျော်ရှိ နေပြီးလို့လဲ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကို ခင်မောင်စိုးမင်း ကပြောပြ ပေးမှာပါ။
ချင်းပြည်နယ်မှာ စစ်ရေးတင်းမာမူ ကာလအတွင်း အရပ်သားတွေ ပစ်သတ်ခံရမှု ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေ ပိုများလာနေပါတယ်။ မနေ့က မေလ(၂၅)ရက်နေ့မှာ မင်းတပ်မြို့နယ် ပြေကျေးရွာက အရပ်သားတဦး သံသယနဲ့ ပစ်သတ်ခံရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီလအတွင်း မင်းတပ်နဲ့ တီးတိန်မြို့နယ်ဘက်မှာ အရပ်သားတွေ ချင်းကာကွယ်ရေး CDFအဖွဲ့နဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေ ရှိနေတာပါ။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ချင်းပြည်သူတွေ မတရားအသတ်ခံရတာ (၂၀၀ ) ကျော်ရှိ နေပြီးလို့လဲ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကို ခင်မောင်စိုးမင်း ကပြောပြ ပေးမှာပါ။
မေလ(၂၅)ရက်မနေ့တုန်းက မင်းတပ်မြို့နယ် ပြေကျေးရွာမှာ ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဟာရှိန်းအွမ် (ခ) ကိုဟိန်းထိုက်ဇော်ကို စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ မင်းတပ်မြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“ သူကအရင်တုန်းကတော့ ချင်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု လက်ဝှေ့သမားရယ် ရိုးရာလက်ဝှေ့ထိုးတယ်။ သူကတော့ လူကောင်းတယောက်ပါ။ သူတို့ကတော့ သံသယဝင်တယ်။ သူကတော့ မိသားစု ပြန်ပြီးသွားတွေ့တာပေါ့။ အဲတာကို ဒလန်ကသတင်းပေးလို့ အဲဒီအချိန်ကို စကစတွေက ဝိုင်းလို့သူက ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ပြီး ပြေးတဲ့အချိန်မှာ စကစ ဘက်က ပစ်လိုက်တာပေါ့။ အဲဒီနေရာမှာ သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ မနေ့က မနက်ပိုင်းလောက်မှာဖြစ်တယ်။ ’’
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ(၁၆)ရက်နေ့တုန်းကလဲ မင်းတပ်မြို့က ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တဦး မကွေးတိုင်း ကျောက်ထုမြို့ကို သွားစဉ်မှာ လမ်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးသွားရာကနေ သတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ အဆိုပါမြို့ခံကဘဲ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ သူကလဲ ကျွန်တော်တို့အသိထဲကလူငယ်တဦးပါဘဲ။ သူကတော့ အဲဒီနေ့က စကစ ယာဉ်တန်း မင်းတပ်ကိုပြန်ဝင်ပြီး။ ဝင်ပြီးတော့မှ သူတို့ကရှေ့ပြေးလွှတ်တာပေါ့။ ဒီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာ။ အဲဒီမှာသူတို့တော်တော်လေး အထိနာတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အချိန် အဲဒီမင်းတပ်ကလူငယ်ကဆင်းတာပေါ့။ အဲဒီကားအနား သိရပါတယ်။ အဲတာနဲ့သူကအစအန အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့။ သူကတပ်ရင်းထဲမှာရှိသလိုလို သတင်းတွေက အမျိုးမျိုးကြားရတယ်။ တနေ့ကလားကျွန်တော်တို့သတင်းပြန်ကြားရတာကတော့ သူကအိမ်သာကျင်းဟောင်းမှာ ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုပစ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။’’
မေ ၁၆ ရက်မှာ မင်းတပ်ကနေ ကျောက်ထုဘက်ကို ရှေ့ပြေးဆင်းသွားတဲ့ စစ်ကောင်စီမော်တော်ယဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့အပြီ့း လူငယ်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အလောင်းကို အိမ်သာကျင်းထဲ စွန့်ပစ် သတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
မင်းတပ်မြို့နယ်ဘက်မှာ ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ တွေအများအပြား မကွေးတိုင်းကျောက်ထုမြို့နယ်နဲ့ ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေဘက်ကိုတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်တီးတိန်မြို့မှာလဲ အမဲလိုက်ပြန်လာတဲ့ ဆိုင်းဇန်ကျေးရွာသား လူငယ်နှစ်ဦးကို မေ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ပိုင်း အိမ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ စစ်ကောင်စီ ကင်းလှည့်အဖွဲ့နဲ့ဆုံမိရာမှ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ တီးတိန်မြို့ခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“ သူတို့ ခလရ(၂၆၉)က တီးတိန်မြို့ပေါ်မှာဘဲ။ သူတို့အရှေ့ကိုဖြတ်သွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်။ ဖမ်းပြီးတော့ပစ်သတ် သွားတာ။ သူကဆိုင်းဇန်ရွာသားပေါ့။ ဆိုင်းဇန်ဆိုတာက တီးတန်နဲ့(၅)မိုင်(၆)မိုင် နီးနီးလေးပါ။ တကယ်တော့သူက အမဲ လိုက်တာလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့တီးတိန်နဲ့တွန်းဇံကြားမှာပေါ့။ (၂၁)ရက်နေ့ညနေပိုင်းက တွန်းဇံဘက်မှာ အမဲ လိုက်တာပြန်လာတော့ သူတို့ အဲဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတာပေါ့။ တပ်ကုန်းအရှေ့ဖြတ်နေတဲ့အချိန် သူတို့ဆိုင်ကယ်မှောက် တယ်လို့ပြောတယ် ကလေး တွေကလေ။ တပ်ကလူတွေကသွားထူတော့သေနတ်ကြီးကထွက်လာတာ။ အမဲလိုက်တဲ့ တူမီးသေနတ်ပေါ့။ တူမီးသေနတ်ထွက်လာတော့ သူတို့အဲဒီနေရာခေါ်သွားပြီးတော့ တခါထဲသတ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အလောင်းလဲပြန်မပေးဘူး။ ’’
စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Pa Pau Za Maung၊ နဲ့အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် Tg. Pau Suan Thang တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
စစ်တပ်ကနေ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာ ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတော့ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဒုတိယအမှုဆောင်ါးရိုက်တာ ဇာအုတ်ကလေန် Za Uk ling ကအခုလိုပြောပါတယ်။
“ ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကများနေပါပြီး။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မတရားသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတာ ချင်းပြည်သူလူထုကနေ အယောက်ပေါင်း(၂၃၀) ကျော်ပါပြီ။ အခုလဲမင်းတပ်မြို့နယ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် တီးတိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူအားလုံးကိုသူတို့ ရန်သူလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ လုပ်ရပ်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဟာ ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့စစ်အာဏာရှင် စစ်တပ်ရှိနေသ၍တော့ ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ အဲတာ ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ’’
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နာဝါရီလ ပထမအပတ်ကလဲ မတူပီမြို့နယ်မှာ စစ်တပ်ကနေ လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ရွာသား (၁၀)ဦးဟာ သတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တပ်မတော်ပြောခွင့်ရကတော့ ရွာသားတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တာမဟုတ်လဲ ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ CDFအဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပြောပါတယ်။
စဈရေးပဋိပက်ခအတှငျး ခငျြးပွညျနယျတှငျ ဖမျးဆီးသတျဖွတျခံရမှုမြားလာ (ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့)
ခငျြးပွညျနယျမှာ စဈရေးတငျးမာမူ ကာလအတှငျး အရပျသားတှေ ပဈသတျခံရမှု ဖမျးဆီးခံရမှုတှေ ပိုမြားလာနပေါတယျ။ မနကေ့ မလေ(၂၅)ရကျနမှေ့ာ မငျးတပျမွို့နယျ ပွကြေေးရှာက အရပျသားတဦး သံသယနဲ့ ပဈသတျခံရတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ ဒီလအတှငျး မငျးတပျနဲ့ တီးတိနျမွို့နယျဘကျမှာ အရပျသားတှေ ခငျြးကာကှယျရေး CDFအဖှဲ့နဲ့ ဆကျနှယျနတေယျဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ ဖမျးဆီးသတျဖွတျခံရမှုတှေ ရှိနတောပါ။ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး ခငျြးပွညျသူတှေ မတရားအသတျခံရတာ (၂၀၀ ) ကြျောရှိ နပွေီးလို့လဲ ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ တာဝနျရှိသူကပွောပါတယျ။ ဒီအကွောငျး ရနျကုနျကပေးပို့တဲ့သတငျးကို ခငျမောငျစိုးမငျး ကပွောပွ ပေးမှာပါ။
မလေ(၂၅)ရကျမနတေု့နျးက မငျးတပျမွို့နယျ ပွကြေေးရှာမှာ ပွညျနယျကိုယျစားပွု လကျဝှသေ့မားတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုဟာရှိနျးအှမျ (ခ) ကိုဟိနျးထိုကျဇျောကို စဈကောငျစီတပျကနေ ပဈသတျခဲ့တယျလို့ မငျးတပျမွို့ခံတဦးက ပွောပါတယျ။
“ သူကအရငျတုနျးကတော့ ခငျြးပွညျနယျကိုယျစားပွု လကျဝှသေ့မားရယျ ရိုးရာလကျဝှထေို့းတယျ။ သူကတော့ လူကောငျးတယောကျပါ။ သူတို့ကတော့ သံသယဝငျတယျ။ သူကတော့ မိသားစု ပွနျပွီးသှားတှတေ့ာပေါ့။ အဲတာကို ဒလနျကသတငျးပေးလို့ အဲဒီအခြိနျကို စကစတှကေ ဝိုငျးလို့သူက ပွတငျးပေါကျကနေ ခုနျပွီး ပွေးတဲ့အခြိနျမှာ စကစ ဘကျက ပဈလိုကျတာပေါ့။ အဲဒီနရောမှာ သဆေုံးသှားတယျလို့သိရပါတယျ။ မနကေ့ မနကျပိုငျးလောကျမှာဖွဈတယျ။ ’’
ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ(၁၆)ရကျနတေု့နျးကလဲ မငျးတပျမွို့က ဆယျကြျောသကျ လူငယျတဦး မကှေးတိုငျး ကြောကျထုမွို့ကို သှားစဉျမှာ လမျးမှာ စဈကောငျစီတပျက ဖမျးဆီးသှားရာကနေ သတျဖွတျခံရတယျလို့ အဆိုပါမွို့ခံကဘဲ ဆကျပွောပါတယျ။
“ သူကလဲ ကြှနျတျောတို့အသိထဲကလူငယျတဦးပါဘဲ။ သူကတော့ အဲဒီနကေ့ စကစ ယာဉျတနျး မငျးတပျကိုပွနျဝငျပွီး။ ဝငျပွီးတော့မှ သူတို့ကရှပွေ့ေးလှတျတာပေါ့။ ဒီပူးပေါငျးတပျဖှဲ့က မိုငျးဆှဲတိုကျခိုကျတာ။ အဲဒီမှာသူတို့တျောတျောလေး အထိနာတယျလို့သိရပါတယျ။ အဲဒီဝနျးကငျြမှာရှိနတေဲ့အခြိနျ အဲဒီမငျးတပျကလူငယျကဆငျးတာပေါ့။ အဲဒီကားအနား သိရပါတယျ။ အဲတာနဲ့သူကအစအန အဆကျသှယျပွတျသှားတာပေါ့။ သူကတပျရငျးထဲမှာရှိသလိုလို သတငျးတှကေ အမြိုးမြိုးကွားရတယျ။ တနကေ့လားကြှနျတျောတို့သတငျးပွနျကွားရတာကတော့ သူကအိမျသာကငျြးဟောငျးမှာ ပေါ့နျော။ အဲဒီလိုပဈထားခဲ့တယျလို့သိရတယျ။’’
မေ ၁၆ ရကျမှာ မငျးတပျကနေ ကြောကျထုဘကျကို ရှပွေ့ေးဆငျးသှားတဲ့ စဈကောငျစီမျောတျောယဉျတနျးကို ဒသေကာကှယျရေးပူးပေါငျးတပျဖှဲ့က မိုငျးဆှဲတိုကျခိုကျခဲ့အပွီ့းလူငယျကို ဖမျးဆီးခဲ့ပွီး အလောငျးကို အိမျသာကငျြးထဲ စှနျ့ပဈ သတျခဲ့တာလို့ဆိုပါတယျ။
မငျးတပျမွို့နယျဘကျမှာ ဒသေခံကာကှယျရေးအဖှဲ့နဲ့စဈကောငျစီတပျတှအေကွားဖွဈပှါးခဲ့တဲ့တိုကျပှဲကွောငျ့ ဒသေခံ တှအေမြားအပွား မကှေးတိုငျးကြောကျထုမွို့နယျနဲ့ ဘေးလှတျရာဒသေတှဘေကျကိုတိမျးရှောငျနကွေပါတယျ။
ခငျြးပွညျနယျတီးတိနျမွို့မှာလဲ အမဲလိုကျပွနျလာတဲ့ ဆိုငျးဇနျကြေးရှာသား လူငယျနှဈဦးကို မေ ၂၁ ရကျနေ့ ညနေ ပိုငျး အိမျပွနျလာတဲ့ခြိနျမှာ စဈကောငျစီ ကငျးလှညျ့အဖှဲ့နဲ့ဆုံမိရာမှ ဖမျးဆီးသတျဖွတျခံရတယျလို့ တီးတိနျမွို့ခံတဦးက ပွောပါတယျ။
“ သူတို့ ခလရ(၂၆၉)က တီးတိနျမွို့ပျေါမှာဘဲ။ သူတို့အရှကေို့ဖွတျသှားတဲ့ကလေးနှဈယောကျ။ ဖမျးပွီးတော့ပဈသတျ သှားတာ။ သူကဆိုငျးဇနျရှာသားပေါ့။ ဆိုငျးဇနျဆိုတာက တီးတနျနဲ့(၅)မိုငျ(၆)မိုငျ နီးနီးလေးပါ။ တကယျတော့သူက အမဲ လိုကျတာလို့ပွောတယျ။ ကြှနျတျောတို့တီးတိနျနဲ့တှနျးဇံကွားမှာပေါ့။ (၂၁)ရကျနညေ့နပေိုငျးက တှနျးဇံဘကျမှာ အမဲ လိုကျတာပွနျလာတော့ သူတို့ အဲဒီနရောကိုဖွတျသှားတာပေါ့။ တပျကုနျးအရှဖွေ့တျနတေဲ့အခြိနျ သူတို့ဆိုငျကယျမှောကျ တယျလို့ပွောတယျ ကလေး တှကေလေ။ တပျကလူတှကေသှားထူတော့သနေတျကွီးကထှကျလာတာ။ အမဲလိုကျတဲ့ တူမီးသနေတျပေါ့။ တူမီးသနေတျထှကျလာတော့ သူတို့အဲဒီနရောချေါသှားပွီးတော့ တခါထဲသတျသှားတယျလို့ ပွောတယျ။ အလောငျးလဲပွနျမပေးဘူး။ ’’
စဈကောငျစီတပျက ဖမျးဆီးသတျဖွတျတဲ့လူငယျတှကေတော့ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ Pa Pau Za Maung၊ နဲ့အသကျ ၂၁ နှဈအရှယျ Tg. Pau Suan Thang တို့ဖွဈကွပါတယျ။
စဈတပျကနေ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး ခငျြးပွညျနယျဘကျမှာ ခငျြးကာကှယျရေးအဖှဲ့နဲ့ဆကျနှယျတယျဆိုပွီး စှပျစှဲ ခကျြနဲ့ ဖမျးဆီးသတျဖွတျခဲ့တဲ့အခွအေနကေိုတော့ ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ ဒုတိယအမှုဆောငျါးရိုကျတာ ဇာအုတျကလနျေ Za Uk ling ကအခုလိုပွောပါတယျ။
“ ဒီလိုမြိုးဖွဈစဉျကမြားနပေါပွီး။ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးမှာ မတရားသတျဖွတျခွငျးခံရတာ ခငျြးပွညျသူလူထုကနေ အယောကျပေါငျး(၂၃၀) ကြျောပါပွီ။ အခုလဲမငျးတပျမွို့နယျမှာဘဲဖွဈဖွဈ တီးတိနျမှာဘဲဖွဈဖွဈ သူတို့စဈဆငျရေးလုပျတဲ့အခြိနျမှာ ပွညျသူအားလုံးကိုသူတို့ ရနျသူလိုသတျမှတျပွီးတော့ လုပျရပျတှဘေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးဖွဈစဉျတှဟော ဆိုလို့ရှိရငျ သူတို့စဈအာဏာရှငျ စဈတပျရှိနသေ၍တော့ ကြှနျတျောတို့ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ပွဿနာဖွဈနတေယျ။ အဲတာ ကြှနျတျောတို့စိုးရိမျမကငျးဖွဈမိပါတယျ။ ’’
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇန်နာဝါရီလ ပထမအပတျကလဲ မတူပီမွို့နယျမှာ စဈတပျကနေ လမျးပွအဖွဈချေါဆောငျသှားတဲ့ ရှာသား (၁၀)ဦးဟာ သတျဖွတျခံရတယျလို့ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့က ထုတျပွနျထားပါတယျ။
တပျမတျောပွောခှငျ့ရကတော့ ရှာသားတှကေို ဖမျးဆီးသတျဖွတျတာမဟုတျလဲ ခငျြးကာကှယျရေးအဖှဲ့နဲ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားလို့ ကဆြုံးသှားတဲ့ CDFအဖှဲ့ဝငျတှလေို့ပွောပါတယျ။